32 Zvino Jakobho, akaenda, ngirozi dzaMwari dzikasangana naye.+ 2 Paakadziona, Jakobho akabva ati: “Uyu musasa waMwari!”+ Nokudaro akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Mahanaimu.+ 3 Jakobho akabva atuma nhume+ pamberi pake kuna Isau mukoma wake kunyika yeSeiri,+ nyika yeEdhomu,+ 4 akadzirayira, achiti: “Munoti kunashe wangu,+ kuna Isau, ‘Zvanzi naJakobho mushandi wenyu: “Ndakagara naRabhani ndiri mutorwa uye ndakagara kwenguva refu kusvikira zvino.+ 5 Ndava nenzombe nembongoro, makwai, nevashandirume nevashandikadzi,+ ndatumira shoko kuti ndizivise ishe wangu, kuti mundinzwire nyasha.”’”+ 6 Kwapera nguva yakati nhume dzacho dzakadzoka kuna Jakobho, dzichiti: “Takasvika kuna Isau mukoma wenyu, ari kuuyawo kuzosangana nemi, ane varume mazana mana.”+ 7 Jakobho akatya kwazvo, akazvidya mwoyo.+ Naizvozvo akakamura vanhu vaaiva navo, nemakwai nemombe nengamera kuva mapoka maviri,+ 8 akati: “Kana Isau akasvika kune rimwe boka akarirwisa, pachava neboka rinosara kuti ritize.”+ 9 Pashure paizvozvo Jakobho akati: “Haiwa Mwari wababa vangu Abrahamu naMwari wababa vangu Isaka,+ haiwa Jehovha, imi muri kundiudza kuti, ‘Dzokera kunyika yako nokuhama dzako uye ndichakuitira zvakanaka,’+ 10 handikodzeri kuwana mutsa wose worudo nokutendeka kwose zvamakaitira mushumiri wenyu,+ nokuti ndakayambuka rwizi rwaJodhani urwu nomudonzvo wangu chete asi zvino ndava mapoka maviri.+ 11 Ndinunurei, ndinokutetererai,+ paruoko rwomukoma wangu, paruoko rwaIsau, nokuti ndinomutya kuti angauya akarwisa ini,+ amai pamwe chete nevana. 12 Imi makati, ‘Chokwadi ndichakuitira zvakanaka, ndichaita kuti vana vako vave sejecha regungwa, risingagoni kuverengwa nokuda kwokuwanda kwaro.’”+ 13 Akaramba akagara ipapo usiku ihwohwo. Pane zvaakanga awana noruoko rwake akatora chipo chokupa Isau mukoma wake:+ 14 nhunzvi dzembudzi mazana maviri nenhongo makumi maviri, makwai makadzi mazana maviri nemakondohwe makumi maviri, 15 ngamera dzinoyamwisa makumi matatu nemhuru dzadzo, mhou makumi mana nenzombe gumi, mbongoro hadzi makumi maviri nembongoro gumi dzanyatsokura.+ 16 Akabva apa vashandi vake boka rimwe richitevedzana nerimwe riri roga, akaramba achiti kuvashandi vake: “Yambukai muri mberi kwangu, musiye chinhambwe pakati peboka neboka.”+ 17 Uyezve akarayira wokutanga, achiti: “Kana Isau mukoma wangu akasangana newe, akakubvunza achiti, ‘Uri waaniko, uri kuenda kupi uye izvi zviri pamberi pako ndezvaani?’ 18 ubve wati, ‘Ndezvomushandi wenyu, Jakobho. Chipo,+ chatumirwa ishe wangu,+ Isau, uye tarirai! iyewo ari shure kwedu.’” 19 Akarayirawo wechipiri, nowechitatu, uye vose vaitevera mapoka acho ezvipfuwo, achiti: “Mutaure naIsau seizvi pamunosangana naye.+ 20 Mutiwo, ‘Tarirai mushandi wenyu Jakobho ari shure kwedu.’”+ Nokuti akati: “Ndingamunyaradza nechipo chiri kuenda chiri mberi kwangu,+ ndozoona chiso chake. Zvimwe achandigamuchira nomutsa.”+ 21 Naizvozvo chipo chacho chakayambuka chiri mberi kwake, asi iye akarara mumusasa usiku ihwohwo.+ 22 Gare gare usiku ihwohwo akasimuka, akatora madzimai ake maviri+ nevashandikadzi+ vake vaviri nevanakomana vake+ vaduku gumi nomumwe, akayambuka zambuko raJabhoki.+ 23 Naizvozvo akavatora akavayambutsa mupata une rukova,+ uye akayambutsa zvaakanga anazvo. 24 Jakobho akazosara ari oga. Mumwe murume akabva atanga kuita mutsimba naye kusvikira utonga hwotsvuka.+ 25 Paakaona kuti akanga asina kumukunda,+ akabva abata panosangana mapfupa muhudyu make; uye panosangana mapfupa muhudyu yaJakobho pakaminyuka paaiita mutsimba naye.+ 26 Iye akati: “Ndirege ndiende, nokuti utonga hwotsvuka.” Iye akati: “Handisi kuzokuregai muchienda kusvikira matanga mandikomborera.”+ 27 Naizvozvo akati kwaari: “Unonzi ani?” iye akati: “Jakobho.” 28 Akabva ati: “Hauchanzizve Jakobho asi Israeri,+ nokuti warwisana+ naMwari uye nevanhu zvokuti wazokunda.” 29 Jakobho akabvunzawo akati: “Ndapota, ndiudzeiwo zita renyu.” Asi iye akati: “Unobvunzirei zita rangu?”+ Naizvozvo akamukomborera ipapo. 30 Nokudaro Jakobho akatumidza nzvimbo yacho kuti Penieri,+ nokuti, sezvaakataura, “Ndaona Mwari chiso nechiso asi mweya wangu wanunurwa.”+ 31 Zvino zuva rakatanga kumubudira achangopfuura Penueri, asi akanga achikamhina nokuda kwomuhudyu make.+ 32 Ndokusaka vanakomana vaIsraeri vaine tsika yokusadya dzira romuhudyu, riri panosangana mapfupa muhudyu, kusvikira nhasi, nokuti akabata panosangana mapfupa muhudyu maJakobho nechepadzira+ romuhudyu.